3876 Muskoka 118 Road Unit # Sandfield 7 W7, Port Carling, Ontario P0b1j0
Real Estate Listings: » Residential homes » Homes » CA » Ontario » Port Carling » 3876 Muskoka 118 Road Unit # Sandfield 7 W7, Port Carling, Ontario P0b1j01
ISandfield yiCreek ivimbe i-Villa eMuskokan Resort Club. Ukuphumula kohlobo olulodwa eMuskoka ngokunethezeka kakhulu ngakho konke ukunethezeka futhi ngaphandle kwezindleko. Le villa inikeza amakamelo okulala ama-3 lilinye elinendawo yokugezela elandelayo futhi ilala ize ifike kwayi-10. IMuskokan inikezela ngezinsiza ezisezingeni lokuqala kanye nokutholakala ngamalineni ahlanzekile, ukugcinwa kwezindlu ngokugcwele, ukunakekelwa, ukunakekelwa kotshani nokususwa kweqhwa okuhlinzekelwe wena. Mane ulethe ikesi lakho lesudi futhi ujabulele iLake Joseph ngaphandle kokuhlupheka kokugcinwa kwekotishi. I-villa iza ihlotshiswe ngokuphelele ngempahla esezingeni eliphakeme nezinsiza kubandakanya i-BBQ yegesi nama-TV ama-4. Le villa inikela ngekhishi elihlome ngokuphelele, elinekhabethe elenziwe ngokwezifiso, izinto ezakhiwe ngensimbi engagqwali kanye namatafula e-quartz. Igumbi elikhulu liyamangalisa ngophahla lwe-cathedral kanye nendawo yokubasa enhle yamatshe. Ikamelo lokulala eliyinhloko linendawo emangazayo ye-WOW enendawo yokubasa igesi, ukuhamba uye emphemeni omuhle ngokubuka kwechibi, ubhavu omkhulu we-soaker, amasinki amabili kanye neshawa ehlukile. Ibhavu eshisayo yangasese ngaphansi kwe-gazebo ebanzi eceleni kwendawo yokubasa igesi yangaphandle yenza le ndawo ibe yisizini enkulu engu-4. Igumbi leMuskoka elinamathiselwe yileyo ndawo ekhethekile yokubuka ichibi, izinyamazane, izinyoni nezinye izilwane zasendle ezivame ukungena endaweni. Izinsiza zifaka i-clubhouse enekamelo lezeshashalazi, igumbi lamageyimu, itafula lamachibi kanye nomtapo wezincwadi. Kanye nolwandle oluhle olunesihlabathi echibini elihlanzekile laseMuskokas, ichibi elifudumele lisendaweni eyakhiwe ngamatshe kude nomoya opholile ngosuku olupholile. Imidlalo kanye neNkantolo yeTennis, kanye nenkundla yokudlala yezingane, ama-kayak, izikebhe, isikhumulo semikhumbi nendawo yokuzivocavoca enakho konke kufakiwe. Igalofu eliseduze, izindawo zokudlela, ukuhamba ngesikebhe nokuhamba izintaba kuqedela iphakethe. Abanikazi bamanje bavame ukusebenza ekhaya futhi nge-intanethi yayo enejubane elikhulu, le villa inikeze isizini ephelele yokuya emsebenzini kusuka ekotishi amasonto ama-5 ngonyaka. (id: 27) Izici ZokwakhaI -menities: Isikhungo Sokuzivocavoca, Igumbi LeqembuUkwakhiwa Kwesisekelo: UnfinishedBasement Type: FullBuilding Type: HouseConstruction Material: Wood frameConstruction Style - Attach: DetachedCooling Type: Central air conditioningExterior Finish: WoodFire Protection: Alarm systemFoundation Type: BlockHeating Fuel: PropaneHeating Type : Umoya ophoqelelwe
Road Unit# Sandfield 7